အ၀လွန် ရောဂါအကြောင်း | အိမ့်မှူးသော်
ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန်ထက်များပြီး ၀ခြင်း (Overweight) နဲ့ အ၀လွန်ရောဂါ (Obesity) ရယ်လို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည် စံနှုန်း Body Mass Index (BMI) နှင့် တိုင်းပါတယ်။ BMI=ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ BMI ၁၈ မှ ၂၅ ကြားမှာရှိနေရင် ပုံမှန်ပါပဲ။ ၂၅ ထက်ကျော်သွားရင်၊ (အရပ်အမြင့်မီတာ)၂ ကိုယ်အလေးချိန်များတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ ၃၅ ထက်ကျော်သွားရင် အ၀လွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
၀လာပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဒီထက်ဆက်မ၀အောင် ထိန်းနိုင်ပြီဆိုရင် ပထမအဆင့်အောင်မြင်လာပြီ။ ပိန်ချင်လို့ ဆိုပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာလည်း အားမပေးပါဘူး။ အမြန်ပိန်အောင်လုပ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆစ်တွေမခံနိုင်ပါ။ တစ်လကို ငါးပေါင်ထက်ပိုကျရင်တော့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းပိန်သွားအောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ၀တဲ့သူတွေကို တွေ့ရင် ကိုယ်ချင်းစာပြီး တက်နိုင်သလောက် ကူညီပေးသင့်ပါတယ်။ ပိန်ဆေးဆိုပြီး ကြော်ငြာတဲ့ဆေးတွေကို သေသေချာချာ မသိသေးဘဲ မသောက်စေချင်ပါဘူး။ ငါးကရတဲ့အဆီတွေက လူကိုအကျိုးပြုတဲ့အတွက် ငါးများများစားစေချင်တယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်း ထက်ပိုကောင်းတဲ့အတွက် မ၀သေးတဲ့ လူတွေဟာ မ၀အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Unquestionably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest factor to be aware of.
just don't recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing with no need side effect , people can takeasignal. Will probably be again to get more. Thank you